Sidee looga daawadaa Disney + TV-ga ulator Emulator.online ▷ 🥇
Disney + waxay kubilaabtay guul weyn oo dadweyne sidoo kale talyaaniga, maxaa yeelay waxay isku daraysaa kartoonada ugufiican caruurta (laga bilaabo fasalada waaweyn ilaa soosaarka cusub ee Pixar) oo leh taxane TV oo gaar ah oo ku saleysan aduunka Star Wars, iyadoo aan la ilaawin dhamaan Filimo yaab leh. In kasta oo tartan adag ka socdo Netflix iyo Amazon Prime Video, adeegsadayaal badan ayaa doorbidaya inay Disney + u hayaan sidii baahin baahsan loogu qoroyo qoyska oo dhan, sidoo kalena la siiyo qiimaha tartanka (hadda competitive 6,99 bishiiba ama sanadkiiba mar la qoro 69,99, XNUMX)
Haddii illaa iyo hadda aan ku koobnaanay daawashada Disney + waxyaabaha kaliya ee kombuyuutarka ah ama ugu badnaan kiniinka, waxaan kuu haynaa war wanaagsan: waan awoodnaa dejiso Disney + TV kastaAma Smart TV ama TV shaashad fudud ah (illaa inta ay leedahay dekedda HDMI). Marka, aan wada aragno sida looga daawado Disney + TV-ga, si looga farxiyo carruurta iyo waalidiinta xiiseynaya waxyaabaha qaangaarka ah ee barmaamijkan.
AKHRISO: Disney Plus ama Netflix? Maxaa fiican iyo kala duwanaanshaha
Ka daawo Disney + telefishanka
Barnaamijka Disney + waxaa laga heli karaa tiro badan oo ah qalabka madadaalada qolka fadhiga, sida Smart TV-yada iyo aaladaha leh xiriir HDMI ah, iyadoo ay suuragal tahay sidoo kale ka faa'iideyso 4K UHD iyo HDR waxyaabaha qeexitaanka sare leh (haddii xaaladaha shabakadda iyo aaladaha la isticmaalay ay oggolaadaan). Haddii aynaan weli haysan xisaabta Disney +, waxaa ugu wanaagsan inaan helno mid ka hor intaadan akhrin soo-jeedinta cutubyada tilmaamahan; Si aad u diiwaangeliso koonto cusub, si fudud u tag goobta diiwaangelinta rasmiga ah, qor cinwaan emayl sax ah oo raac tilmaamaha lagu siiyay shaashadda.
Disney + telefishanka Smart TV
Haddaan mid leenahay TV-ga casriga ah (LG, Samsung ama Android TV) waxaan ku raaxeysan karnaa waxyaabaha Disney + ka kooban adoo galaya dukaanka arjiga lana raadinayo dalabka Disney +.
Ka dib markaad rakibto arjiga, riix badhanka ku yaal kontoroolka fog si aad u furto qaybta Smart, riix barnaamijka Disney + oo ku soo gal aqoonsigayaga. Laga soo bilaabo Smart TV waxaan ka faa'iideysan karnaa dhammaan waxyaabaha ku jira tayada ugu sareysa, iyadoo laga faa'iideysanayo (haddii telefishanka la jaan qaadayo) sidoo kale qeexitaanka sare ee aadka u sarreeya ee 4K UHD iyo HDR; Si loo helo tayada ugu sareysa, xiriir internet oo aad u dhakhso badan ayaa loo baahan yahay (ugu yaraan 25 Mbps soo dejinta), haddii kale waxa ku jira waxaa lagu ciyaari doonaa tayada caadiga ah (1080p ama xitaa ka hooseeya). Wixii macluumaad dheeraad ah, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hagaheena. Sida loogu xiro Smart TV internetka.
Disney + qalabka ciyaarta
Haddii aan isku xirno qalabka ciyaarta ee ugu dambeeyay (PS4, Xbox One, PS5 ama Xbox Series X / S), waxaan u isticmaali karnaa inaan ku daawano Disney + nuxurka hakadka u dhexeeya kulan iyo kulan kale, anagoo ka faa'iideysaneyna isla tayada aan ka heli doono Smart TV.
Qalabka loo yaqaan 'Console' oo horey ugu xirnaa TV-ga HDMI waxaan ku daawan karnaa muuqaalka 'Disney + adoo noo geynaya guddiga qunsuliyada (adoo riixaya badhanka PS ama badhanka XBox), furitaanka qeybta Codsiga O Aplicaciones iyo furitaanka arjiga Disney +, horeyba ugujiray asal ahaan dhamaan qunsuliyadaha lasoo sheegay. Haddii aynaan heli karin abka la rakibay, waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan furno dukaanka ciyaarta ama badhanka raadinta oo aan raadino barnaamijka. Disney + kuwa la heli karo. Xitaa konsoliyadaha waa suurtagal in laga faa'iideysto 4K UHD iyo HDR (haddii TV-ga sidoo kale la jaan qaadayo), laakiin waa kaliya haddii aan heysanno noocyada ugu awoodda badan qunsuliyadaha hadda la iibinayo (PS4 Pro, Xbox One X, PS5 iyo Xbox Series X / S) .
Disney + Fire Stick TV-gaaga
Haddii aanaan haysan TV-ga Smart-ka ah ama barnaamijkii loo qoondeeyey aanu joogin, waxaan si dhakhso leh ugu hagaajin karnaa innagoo ku xireyna dongle Dabka TV Stick, waxaa laga heli karaa Amazon wax ka yar € 30.
Ka dib markaad ku xirto TV-ga Dabka ah TV-ga (adigoo raacaya tilmaamaha lagu arkay kuweena hage heegan ah), xulo isha saxda ah ee TV-ga, fur qaybta Aplicaciones, waxaan raadineynaa Disney + oo ka mid ah kuwa xaadirka ku jira oo aan galno. Fire TV Stick joogto ah iyo qalabka Lite waxay taageeraan tayada tayada caadiga ah (1080p ama ka hooseeya); hadaan rabno Disney + waxyaabaha ku jira 4K UHD waa inaan diirada saarnaa Fire TV Stick 4K Ultra HD, Waxaa laga heli karaa Amazon qiimo ka sareeya (€ 60).
Disney + Chromecast-kaaga
Qalab kale oo gudbinta aad caan u ah oo hadda guri walba ka jira ayaa ah Google Chromecast, waxaa si toos ah looga heli karaa barta Google.
Ka dib markii aan ku xirno qalabka 'HDMI dongle' TV-ga iyo Wi-Fi, waxaan ku fureynaa dalabka Disney + taleefankayaga casriga ah ama kaniini (waxaan ku xusuusineynaa in arjiga loo heli karo Android iyo iPhone / iPad), waxaan ku galnaa aqoonsiga adeegga, waxaan dooranay waxyaabaha la soo saari doono iyo, isla marka la helo, waxaan ku riixnaa badhanka dusha sare Siidaynta, si looga sii daayo fiidiyowga TV-ga dhex Chromecast.
Disney + Apple TV-gaaga
Hadaan ka mid noqono kuwa nasiibka leh milkiilayaasha Apple TV qolka, waan u isticmaali karnaa daawashada Disney + tayada ugu sareysa.
Si aad ugu isticmaasho Disney + qalabka qolka fadhiga ee calaamadeysan ee Apple, shid, u gudub nidaamka nidaamka, riix codsi Disney + oo geli aqoonsiyada gelitaanka; haddii arjigu uusan joogin, waxaan fureynaa App Store gaar ah, raadi Disney + oo ku rakib qalabka. Tan iyo Apple TV for sale taageertaa 4K UHD e l'HDR Iyada oo ay ku jirto, waa suurtagal in la arko Disney + waxyaabaha ku jira tayada ugu sareysa, illaa inta telefishanku la jaan qaadayo teknoolojiyadaan iyo haddii aan leenahay khadka tooska ah ee Internetka (sida horeyba loo soo sheegay, waxaa loo baahan yahay soo dejin 25 Mbps ah).
Keenista Disney + telefishankeenna waa ficil ahaan waa qasab haddii aan hawlgelinnay adeeggan qulqulka, maaddaama tayada ugu sarraysa lagu heli karo oo keliya iyadoo lagu hagaajinayo arjiga Smart TV ama la adeegsanayo mid ka mid ah hababka kale ee lagu muujiyey tusahan. Loogu talagalay dhammaan adeegsadayaasha leh TV shaashad fudud oo fudud oo aan shaqeynin kaliya hel Fire TV Stick ama Chromecast si aad uhesho waxyaabaha kajira Disney + dhaqso iyo si fudud.
Haddii aan nahay taageerayaal waaweyn oo qeexitaan qeexan oo heer sare ah, waad ku farxi doontaa inaad sii wadato akhrinta maqaalladayada Sida loogu isticmaalo 4K telefishanka Smart TV mi Dhamaan siyaabaha lagu daawado Netflix gudaha 4K UHD. Haddii, dhinaca kale, aan raadineyno adeegyo kale oo aan ku daawan karno kartoonnada TV-ga laga sii daayo, kaliya aqriso hageheena. Ka daawo sawirada kartoonada internetka, boggaga iyo barnaamijyada si bilaash ah.
Waa maxay raadinta raajada iyo kaararka fiidiyoowga ah ee laga heli karo?
Tijaabada sirdoonka Japan ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa 15 daqiiqo
Sida farshaxanka loo yaqaan 'pixel art' looga sameeyo kombiyuutarrada, taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada
Sida loogu daro kaarka Google Play iyo Apple Store
Barnaamijyada Koodh ee Ugu Fiican
Ciyaaraha adduunka ugu furan ee ugu wanaagsan ee Android iyo iPhone
Sida loo xakameeyo xawaaraha cayaaraha kombiyuutarka
Sida loo demiyo dhammaan dareemayaasha taleefankaaga casriga ah
Ciyaaraha labiska ugufiican iyo cayaaraha moodada ee Android iyo iPhone
Sida loo isticmaalo eGPU ee ku saabsan MacBook si loo wanaajiyo waxqabadka 3D
Sida loo joojiyo diiwaangelinta ku saabsan Android, iPhone, iPad, iyo Windows 10